ကွင်းဆက် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ် – MBC
APBF Sunday at MBC
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်၏ ကွင်းဆက် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်း အစီအစဉ်ကို ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းအချိန်ကို ၂၂.၈.၂၀၁၉၊ ကြာသပတေးနေ့ ည ၁၂း၀၀ နာရီမှ ၂၃.၈.၂၀၁၉ သောကြာနေ့ မွန်းတည့် ၁၂း၀၀ နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားပြီး နေ့တစ်ဝက် အစာရှောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆက် ဆုတောင်းမည့် အချိန်မှာ ၂၃.၈.၂၀၁၉ သောကြာနေ့ နံနက်(၆း၀၀)နာရီမှညနေ(၆း၀၀)နာရီ အထိ၊ အသင်းချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ(၂)တွင် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်ညီသော နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဖြစ်စေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရန် နှင့်
၂။ အနာဂတ်တွင်လည်း အသင်းချုပ်သည် ဘုရားရှင် ဦးဆောင်လမ်းပြမှုအတိုင်း အကြွင်းမဲ့ ခံယူပြီး၊ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနေသော အသင်းချုပ်၏ အခြေခံ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည့် အသင်းချုပ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းကို စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဆက်ကပ် လု်ပဆောင်သွားရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း၊ သက်သေခံဝေမျှခြင်း။ အဖွဲ့ခွဲဆုတောင်းခြင်း၊ စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်း၊ ဆက်ကပ်ဝတ်ပြုခြင်း။အစီအစဉ်ကိုမူ အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် (၂၃.၈.၂၀၁၉) သောကြာနေ့၊နံနက်(၈၀၀-၁၂း၀၀)နာရီအချိန်ထိ ပြုလုပ်ရာ အစီအစဉ်မှူးအဖြစ် Rev. Dr. စောအယ်သော၊ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် အစီအစဉ်အကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းကို အသင်းချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးRev. Dr. ထန်ကျင့်လျန်းနှင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို Rev. Dr. စောစိုင်းရပ်စ်စိန်က ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
သက်သေခံဝေမျှခြင်းကို ဆရာမနန့်ခင်ခင်ရွှေ၊ ဆရာ စောဂျဒ်စန်ညိုနှင့် Rev. Dr. စောအယ်သောတို့ကလည်းကောင်း၊ စုပေါင်း ဆုတောင်းခြင်းကို Rev.ရိုဆန်းကလည်းကောင်း၊ ဆက်ကပ်ဝတ်ပြုခြင်းကို Rev. စောဟယ်ရီစင်ကလည်းကောင်း ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် မိသားစုများ၊ အသင်းချုပ်ဟူသော ခန္ဓာ တစ်ခုတည်းတွင် အသက်ရှင်နေသောသူများ ဖြစ်ရာ၊ မိမိတို့၏ အသင်းချုပ်ကို စစ်မှန်မှုနှစ့် ချစ်ခင်ကြရန်။
၂။ အသင်းချုပ်၏ လူ/ဒေဖအဖွဲ့ချုပ်များ၊ နယ်အဖွဲ့များနှင့် အသင်းတော်များအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိပြီး ရှေ့သို့ တိုး၍ အတူတကွ ကြီးထွားမှု ရျိရန်။
၃။ ဘုရားသခင်သည် အသင်းချုပ်၊ အဖွဲ့ချုပ်၊ နယ်အဖွဲ့၊ အသင်းတော် အသီးသီးကို အားအင် ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပြီး၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန်။
၄။ ဘုရားသခင်သည် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်အပေါ် သစ္စာရှိခြင်းကို ကျေးဇူးတင်လျက် ခရစ်တော် မိန့်မှာခဲ့သော “ သင်တို့သွား၍ လူမျိုး တကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေပါ” ဆိုသည့် တာဝန်ဝတ္တရားကို ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်။
၅။ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်ကို ဝိညာဉ်တန်ခိုးနှင့် ပြည့်ဝစေပြီး မိမိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသိုင်းအဝိုင်းသို့ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားရန်။
၆။ ရေဘေးနှင့်တွေ့ကြု့နေရသော နေရာဒေသများအတွက်။
၇။ စစ်ဘေးဒဏ် ကြုံတွေ့နေရသော နေရာဒေသများအတွက်။
၈။ အစိုးရအတွက်။ (အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်)
၉။ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနသော အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် နှစ်ခြင်းသာသနာ အနာဂတ်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအတွက်။
၁၀။ အသင်းချုပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်။
ဆက်ကပ်ခြင်းဝတ်တွင် မိမိတို့၏ဝန်ထုပ်များကို သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်ပေါ်တွင် တင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁ကော ၁၃ ဖော်ပြသော မေတ္တာတရား အကြောင်းထဲမှ မိမိနှစ်သက်သော အချက်တစ်ချက်အား ခမည်းတော် သားတော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အဖြစ် ပုံဆောင်သော အသဲပုံ ၃ ခုတွင်လည်းကောင်း၊ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အနာဂတ်တွင် မိမိပြုပြင် ပြောင်းလဲလိုသော အရာများကို နှစ်ခြင်း အသင်းချုပ် လိုဂို အောက်တွင်လည်းကောင်း စာရွက်များဖြင့် ရေးသားပြီး ကပ်ထားခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများက ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါသည်။ ဝန်ထုပ်များ ချထားလျက် ဆက်ကပ်ဆုတောင်းခြင်းကို Rev. အိုက်နပ်တောင်းကလည်းကောင်း၊ မေတ္တာတရား ဖော်ပြချက်နှင့် အသင်းချုပ် အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်စေလိုသော အကြောင်းအရာများကို ဖယောင်းတိုင် မီးများထွန်း၍ ဆက်ကပ်ဆုတောင်းခြင်းကို နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်တွင် အမှုတော်ဆောင် ဆက်ကပ်ခြင်း ယနေ့ အနှစ်(၂၀)ပြည့်သော ရုံးအုပ်ကြီး မန်းဂီးဒီယံကလည်းကောင်း ဦးဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
အစီအစဉ်အပြီးတွင် Rev. Dr. စောအယ်သောက အစားအစာအတွက် ဆုတောင်း ဆက်ကပ်လျက် တက်ရောက်လာသော ဝန်ထမ်းများ စုစေုပါင်း (၅၀)ဦးခန့်သည် အတူတကွ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြပြီး၊ ဆရာမနန့်သီသီမြနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေရေးဌာနက စီစဉ်သော ကြက်သား ဆန်ပြုတ် အီကြာကွေးဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းချုပ် (MBC) ၏ သဘောထား ရပ်တည်ချက်
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 3, 2021
အထူးအုပ်ချုပ် စီမံရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၂၀၂၀)
MBC (181) EC Meeting